Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » COVID mandratra ny fiainana dia sy ny fizahan-tany any Afrika
Ny fipoahan'ny COVID-19 tany amin'ny tsena fizahan-tany mpizahatany any Eropa sy Etazonia dia nampitombo ny fahasahiranan'ny bibidia taorian'ny fidinan'ny fidiram-bolan'ny mpizahatany voahangona hitsidika an'i Afrika tamin'ny taona lasa ka hatramin'ny fiandohan'ity taona ity, hoy ny fanamarihan'ny manampahaizana momba ny fiarovana.
Any Afrika Atsinanana izay loharanom-bolan'ny mpizahatany dia misy fepetra maro hiarovana ny bibidia eto amin'ity faritr'i Afrika ity.
Ny World Wildlife Fund (WWF) dia manombana ny varotra bibidia tsy ara-dalàna mitentina 20 tapitrisa dolara amerikana isan-taona.
Ny fitandremana ny gorila ao Rwanda dia heverina ho fomba iray lehibe hiarovana ny fizahantany izay nanova ity firenena afrikana ity ho toerana fialantsasatra tsara sy tsara indrindra eto amin'ny kaontinanta afrikanina.
Ireo firenena any Afrika Atsinanana dia nanamarika ny Andro manerantany ho an'ny biby dia raha mandinika ny isan'ireo karazam-biby any Afrika atosiky ny antony maro isan-karazany, manomboka amin'ny fanendahana, aretina, fiakarana varotra vokatra tsy ara-dalàna tsy ara-dalàna, fanimbana ny toeram-ponenana, ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro, ary eny, COVID-19.
Ny World Wildlife Fund (WWF) dia manombana ny varotra bibidia tsy ara-dalàna mitentina 20 tapitrisa dolara amerikana isan-taona. I Afrika no kaontinanta voadona indrindra very ny elefanta, ny rhino, ary ankehitriny ny pangolin izay aondrana entana avy any Afrika. Ny karazana biby dia an'i Afrika Varotra varotra tsy ara-dalàna ataon'ny andian-jiolahim-boto ataon'ireo andian-jiolahim-boto avy any Azia atsimo atsinanana izay itomboan'ny vidin'ny biby dia.
Manoloana an'io toe-javatra io, firenena afrikanina maro no mitady hanatsara ny fizotran'ny fizahan-tany ataon'izy ireo amin'ny alàlan'ny fikarohana biby tsy manam-paharoa sy maharitra miaraka amin'ny fametrahana vahaolana teknolojia avo lenta mba hifehezana ny asan-jiolahy amin'ny biby dia. Any Afrika Atsinanana izay loharanom-bolan'ny mpizahatany dia misy fepetra maro hiarovana ny bibidia eto amin'ity faritr'i Afrika ity.
Ny teknolojia dia nahafahan'ny mpiaro ny tontolo iainana hahafantatra tsara ny biby dia, ary koa ny fandrahonana atrehin'izy ireo. Any Kenya, ny Ol Pejeta Conservancy fiaraha-miasa amin'ny Fauna sy Flora International (FFI), Liquid Telecom, ary Arm dia niara-nanangana laboratoara teknolojian'ny fiarovana ny bibidia iray tamin'ny taona 2019.
Ol Pejeta no fonenan'ny rhino fotsy fotsy farany avaratra ary tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny rhino mainty. Ny Rhino ao amin'ity trano ity izao dia azo apetaka amin'ny implant an'ny tandroka ho an'ny fanarahana ny fotoana tena izy, soloina ireo vozon'akanjo nentim-paharazana. Ireo mpiaro ny tontolo iainana izao dia afaka manara-maso ny biby rehetra 2 ora isan'andro, ary koa manara-maso ny fahasalamany, ny maripanan'ny vatana ary ny fomba fifindra-monina.
WWF miaraka amin'ny tetik'asa fiarovana ny tontolo iainana any Kenya dia manohana ny fametrahana fakantsary miaraka amin'ny haitao fanaovana sary mafana mba hanafoanana ny famonoana rhino any amin'ny valan-javaboary 10 any Kenya. Ny fakantsary dia manana sensor hafanana afaka mamantatra fahasamihafana kely amin'ny maripana, ka mora ny mamantatra ireo mpihaza za-draharaha izay matetika miasa amin'ny alina. Ity haitao ity tamin'ny alàlan'ny fakan-tsary manokana dia nitaingina andrana tao amin'ny valan-javaboary Maasai Mara tamin'ny taona 2016 niaraka tamin'ireo mpihaza 160 nosamborina nandritra ny 2 taona niasany, hoy ny tatitra momba ny fiarovana ny bibidia avy any Nairobi.
Ny fitandremana ny gorila ao Rwanda dia heverina ho fomba iray lehibe hiarovana ny fizahantany izay nanova ity firenena afrikana ity ho toerana fialantsasatra tsara sy tsara indrindra eto amin'ny kaontinanta afrikanina. Ireo mpizahatany mitsidika ireo toerana mafana gorila ao Rwanda dia nitombo mihoatra ny 80 isan-jato tao anatin'ny 10 taona lasa.
Tanzania dia nanova ny fiarovana ny bibidia avy amin'ny sivily ka hatramin'ny paikadin'ny para-miaramila nandritra izay 4 taona lasa izay niaraka tamin'ny fivoarana tsara izay nahitana ny fitombon'ny bibidia any amin'ny valan-javaboary lehibe, ny tahirin'ny lalao ary ny faritra voafehy. Ny paikadim-paritra miaramila dia nahita ny fisamborana ireo mpihaza sy sindika heloka bevava natao tamin'ny bibidia tany Tanzania.
Mahafantatra ny mety hisian'ny fiarovana ny bibidia amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany any Afrika, ny Polar fizahan-tany miaraka amin'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) dia nanao dinika virtoaly ny 24 Janoary tamin'ity taona ity mba hiadian-kevitra ary avy eo hizara fomba fijery mikendry ny fitarihana ny fiarovana ny biby any Afrika. Andiam-panatanterahana hetsika vaovao natao hampisondrotana ny fizahan-tany any Afrika amin'ny post COVID-19 miaraka amin'ny fifantohana amin'ireo tetikasa vaovao hisarika ny mpizahatany eto an-toerana sy afrikanina ary iraisampirenena no noresahina tamin'ny fivoriana virtoaly.
Ny minisitry ny fizahantany teo aloha tany Zimbabwe, Dr. Walter Mzembi, dia nilaza tamin'ny fampisehoana virtoaly nataony fa ny heloka bevava, indrindra ny fanararaotana sy fanondranana an-tsokosoko ny vokatra bibidia amin'ny endriny rehetra, dia nanosika karazana biby maro ho any amin'ny sokajy efa ho lany tamingana, ary ny sasany manakaiky lisitra lany tamingana na lany tamingana. Dr. Mzembi dia nilaza fa ny fiatraikany ratsy amin'ny fanararaotana sy fanondranana olona an-tsokosoko dia tsy misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny fizahan-tany miorina amin'ny bibidia fa koa ny faharetana sy ny fivelaran'ny fiompiana lalao, ny vidin'ny zaridaina sy ny tompona fitehirizan-tany miaro ny bibidia, ary ny indostrian'ny fandraisam-bahiny. mpahazo tombony lehibe amin'ny fitantanana ny bibidia manerana an'i Afrika. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny firenena sy ny famotehana ireo sindikate iraisam-pirenena dia fanalahidy hijerena rehefa miatrika ny fisamborana mba hitandroana ny fitohizan'ny fizahan-tany izay ampidirin'ny fiainana dia any Afrika, hoy ny Dr. Mzembi nandritra ny dinika nataony.
Miorina ao Pretoria any Afrika atsimo, ny ATB dia mifantoka amin'ny drafitra maharitra izay mety handrisika ny fampandrosoana ny fizahan-tany any Afrika miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fiarovana ny bibidia ho fampandrosoana fampandrosoana fizahan-tany maharitra.
Andro eran-tany ny fiainana ny fiainana ny fiainana dia ny 3 martsa ho lohalaharana amin'ny fiarovana sy fiarovana ny bibidia manerana an'izao tontolo izao.